Ny fiharian-tsain'ny Klioban'ny Mayo dia sakafo fohy izay manome fahafahana anao handratra mafy ny lanjany.
Mayo Clinic Diet: endri-javatra
Ao anatin'ity rafitra herinaratra ity, ny fitsipika rehetra dia tsy maintsy arahin-tsoratra, tsy misy afa-tsy ny fitsipika. Vitsy dia vitsy ny prescriptions, saingy tsy maintsy tazonina marina izy ireo:
Mandrotsaka anao isa-maraina aorian'ny fivoahana;
mihinana siramamy mofomamy avy amin'ny sakafo Mayo amin'ny fotoana rehetra hanoanana;
Indray mandeha isan-kerinandro, avelao menaka kely miaraka amin'ny ovy potok'aina;
esory ny hena avy amin'ny hena sy ny hoditra,
Esory ny mofo, indrindra fa ny fotsy;
esory ny sira sy ny menaka;
Miala tanteraka amin'ny toaka sy ny soda.
Ny fitsaboana ao amin'ny toeram-pitsaboana dia mifototra amin'ny fampiasana lasopy, izay azonao ihinanana tsy misy farany. Zava-dehibe ny tsy miaritra hanoanana, fa mihinana tsy tapaka. Amin'ny fanarahan-dalàna marina, mety ho very 4 ka hatramin'ny 8 kilao isan-kerinandro ianao, raha betsaka loatra ny lanjany. Raha tsy nahatratra ny marika tianao ho amin'io fotoana io ianao, makà aina kely ao anatin'ny roa andro ary tohizo. Ankoatra ny fihinanana, ny sakafo fihinana dia tsy soso-kevitra.
Prescription for the Mayo Clinic Diet Sup
Tsy dia misy fahasamihafana hafa amin'ny lasopy maro hafa momba ny fahabangan-tena. Fikarakarana tsotra izao, ary mora ny entana:
6 mena midorehitra;
1 karazana seleria;
2 cubes of boompy.
Ny legioma rehetra dia mamon-tsakafo tsara ary mameno rano sira sy dipoavatra. Atsofohy mandritra ny 10 minitra ny hafanana, ary farano ny lasopy amin'ny hafanana mandra-pahavitany azy. Rehefa malemy ny legioma dia vonona ny lasopy!
Inona no tokony ho dikan'ny ampahany? - manontany ianao. Tsotra ny valiny - amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy mihinana io ampahany io ianao, tsy mila mametra izany ianao. Mifehy ny haben'ny ampahany amin'ny filànao sy ny vatanao.
Mayo Clinic Diet: Sakafo feno
Ankoatra ny soup, izay azonao ihinanana tsy misy fetra amin'ny fotoana rehetra, ity sakafo ity dia ahitana ihany koa lisitry ny sakafo tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny sakafo. Diniho àry ireto:
Andro voalohany . Ankoatra ny lasopy, voankazo, misy, afa-tsy ny akondro sy ny voaloboka dia avela. Ny tena mahaliana dia melons sy pastèques. Ankoatra izany, mendrika ny misotro rano be loatra (manodidina ny 1.5 litatra), ary koa ny zava-pisotro mamy sy ny antoko.
Ny andro faharoa . Ankoatra ny lasopy dia ahazoana legioma - voankazo, dite, voatoto, voatoto. Afaka mihinana karazam-bary rehetra ianao. Ny singa manokana dia ny ahitra, ny vary sy ny tsaramaso. Amin'ny sakafo hariva ianao dia afaka mihinana ity ovy miavaka amin'ny dibera ity.
Ny andro fahatelo . Ankoatra ny lasopy, voankazo sy legioma no avela. Ny rehetra afa-tsy ny tranga rehetra dia avela, izay ampiasana ny ovy. Misotroa rano tsy tapaka, misotro hatramin'ny 1.5 litatra isan'andro.
Andro efatra . Ankoatra ny lasopy, voankazo sy legioma ny alalana, anisan'izany ireo akondro sy ronono. Tokony hosotroina koa ny rano, 1.5-2 litatra isan'andro. Ny akondro ihany no voafetra - mety tsy mihoatra ny telo.
Andro dimy . Ankoatra ny lasopy, ny ronono sy voatabiha dia avela. Afaka mihinana roapolo vita amin'ny henan'omby sy tsiroaroa tsy misy fatrany ianao. Farafahakeliny 1-2 isa ilaina mihinana lasopy.
Ny andro fahenina . Ankoatra ny lasopy, ny ronono sy ny legioma dia avela, na ny mahazatra ary ny foly. Raha kely indrindra dia mila mihinana lasopy ianao.
Ny andro fahafito . Ankoatra ny lasopy dia azo atao ny vary, mofo ary legioma. Androany no andro farany tokony hihinana lasopy iray farafaharatsiny. Ny ambiny dia mifototra amin'ny sitrapo.
Amin'ny fiafaran'ny andro fahafito dia hahita vokatra tsara ianao. Na izany aza, mba hitazonana azy ireo, dia zava-dehibe ny hanohizana hatrany ny hifikirana amin'ny sakafo mahavelona - ny mamela ny tavy sy ny mamy, mba hisorohana ny sakafon'ny sakafom-biby sy ny fanosehana. Raha, rehefa avy nihinana ianao, dia miverina amin'ny tsy fahampian-tsakafo ara-dalàna, azonao haingana haingana ny pounds.
Andro fitsaharana amin'ny pastèque - fitsipika sy valiny
Souion onion ho an'ny fatiantoka
Dibera "petal 7" - sakafo isaky ny andro sy ny sakafo
Famaranana andro ho an'ny fahavoazana eo amin'ny yoga
Tena mahia kely i Yana Solomko?
Sakafo ho an'ny sery
Ahoana no nahalalan'i Ani Lorak lanja taorian'ny niterahany - sakafo
Diet Bormental - sakafo ho an'ny herinandro
Ny sakafo ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny fahavoazana
Anti-cellulite sakafo 10 andro
Diet Pegaso miaraka amin'ny psoriasis - menus iray isan-kerinandro sy ireo sakafo mahasalama indrindra
Hoatran'ny ahoana i Ani Lorak?
Ny zavatra azonao hanina amin'ny pancreatitis - sakafo ho an'ny fitsaboana aretina
Fanafody ho an'ny paoma any amin'ny fararano
Fandrarana sy fanalan-jaza - ahoana ny fomba fitondràna amin'ny mainty hoditra?
Lamina ultraviolet ho an'ny trano
Amin'ny firy ny hafanana hanarona raozin'ny ririnina?
Ahoana ny fomba handraisana ny vavony?
Ny habetsahatry ny fiterahana amin'ny alàlan'ny vatana
Lasagne miaraka amin'ny holatra
Firaisana ara-nofo, zava-mahadomelina, rock'n'roll ary toeram-pianarana 35 fanampiny
Fehiloha akanjo amin'ny gorodona
Sofa ho an'ny efitra fandraisam-bahiny miaraka amin'ny fandriana - fitsipika mifidy
Tendrombohitra any UAE
Ny modely an-jatony tamin'ny taona 90 dia notifirina tao amin'ny dokam-barotra Giorgio Armani
Ahoana ny fanesorana bangoroa?
Ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana amin'ny fitondrana vohoka
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy iray hananganana piramida?
Oksana Mukha - Dressing Dresses 2014
Hatsim-paka ao amin'ny cage 2014